पाँच ठूला बैंकले मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाएनन् – Hotpati Media
पाँच ठूला बैंकले मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाएनन्
७ श्रावण २०७६, मंगलवार १९:२६ मा प्रकाशित (1 वर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
काठमाडौं – सञ्चालनमा रहेका ५ वटा वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अटेर गरेका छन् । ३ वटा सरकारी र २ वटा निजी लगानीका गरी ५ बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई नटेरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले गत असार १२ गते मौद्रिक नीति अघि नै मर्जरको प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकसमक्ष बुझाउन निर्देशन दिएका थिए ।
गभर्नर डा. नेपालले डेपुटी गभर्नरद्धय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठसहित राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुलाई अघि राखेर बैंकका अध्यक्ष र सीइओलाई मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाउ निर्देशन दिएका थिए ।
गभर्नरले मौद्रिक नीति असार २७ गते आउने जानकारी गराउँदै त्यसअघि नै मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजानि गरेको छैन । यसैहप्ता गर्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म २३ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता गोविन्द नागिलाले भने, ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, नविल बैंक र एभरेष्ट बैंकले बुझाएका छैनन् ।’
गभर्नरको निर्देशन पछि सञ्चालनमा रहेका २३ वटा बैंकले निर्देशनको रेस्पोन्स गरेका छन् । तर, ५ बैंकले भने उक्त निर्देशनको कुनै रेस्पोन्स गरेका छैनन् ।